असफल काठमाण्डौ महानगरपालिका, घर र जनसंख्या कति छ भन्ने नै थाहा छैन (भिडियोसहित) | रिपोर्टर्स नेपाल
असफल काठमाण्डौ महानगरपालिका, घर र जनसंख्या कति छ भन्ने नै थाहा छैन (भिडियोसहित)
२०७५ माघ २५ गते प्रकाशित, l २१:२९
माघ २५, काठमाण्डौ देशकै राजधानीमा कति घर छन् र कति मान्छे बस्छन् भन्ने तथ्याङ्क छैन भन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपाकिलाको चरम हेलचेक्राइका कारण अवस्था यस्तै छ । घर र जनसंख्याको एकिन तथ्याङ्क नै नराख्ने महानगरले के आधारमा उनीहरुलाई सेवा देला ? कसरी विकास गर्ला ?
घरै घरले ढाकेको काठमाडौं उपत्यकामा कति घर होलान ? कति मान्छे बस्छन् होला ? यो प्रश्नको जवाफ पाउन करिब मुस्किल छ । किनकी यसको रेकर्ड कसैसँग छैन । रेकर्ड राख्नु पर्ने महानगरपालिकाले हो, तर राखेको छैन । घरहरु थपिरहेका छन् । जनसंख्या बढिरहेको छ । तर, महानगरहरु वेमतलबी भएर बसिरहेका छन् । घर, जनसंख्या थाहा नपाउनु यो कुन हदसम्मको लापबाही हो ? स्थानीय सरकार बनेको ढेड बर्ष बित्यो तर, अझै आफ्नो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या र घर थाहा नपाउनेहरुले विकास कसरी गरिरहेका होलान ? यस विषयमा काठमाडौँ महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोललाई सोधेका थियौँ ।
काठमाडौँ महानगरपालिका मात्र होईन ललितपुर महानगरपालिकासँग पनि आफ्नो क्षेत्रमा कति घर छन् ? कस्ता छन् ? र जनसंख्या कति छ ? ठ्क्कै तथ्याङक छैन । वडा कार्यालयहरुसँग रहेका वर्षऔँ पुराना रफ रेकर्डहरुलाई आधार बनाएर मोटा मोटी हिसाब गर्दा स्थायि जनसंख्या ३ लाख र अस्थायि जनसंख्या ३ लाख रहेको अनुमान महानगरको छ ।
देशकै राजधानीमा कति घर छन् र कति मान्छे बस्छन् भन्ने रेकर्ड त छैन नै । नियम बमोजिम बनेका घरहरुको संख्या पनि उत्तिनै कम छ । यहाँ पैसाको बलमा नियम तोडमोड गरिन्छ । र, मापदण्ड मिचेर घरहरु बनाइन्छ । जुन क्रम हिजोदेखि आजसम्म निरन्तर चलिरहेको छ ।
तर, यसलाई रोक्ने काम कहि कतैबाट भएको छैन । जसले महानगरबासीको जिवन दुर्घटनाको जोखिम उच्च बनाएको छ । महानगरहरु सबैलाई करको दायरामा ल्याउने भन्दै सस्तो प्रचार गरिरहेका छन् । तर, आफ्नै नगरमा रहेका घरहरुबाट कर उठाउन सकिरहेका छैनन् । अझै घरबहाल कर उठान करिब उनीहरु असफल जस्तै देखिएका छन् ।
२०७५ माघ २५ गते सम्पादित l २१:३६